FADEEXAD: Garsoore Hore Oo EPL Ah Oo Fashilay Khiyaanada Garsoor Ee Ka Jirta Horyaalkaan Ka Dib Ganaaxii La Duldhigay Sergio Aguero | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » FADEEXAD: Garsoore Hore Oo EPL Ah Oo Fashilay Khiyaanada Garsoor Ee Ka Jirta Horyaalkaan Ka Dib Ganaaxii La Duldhigay Sergio Aguero
FADEEXAD: Garsoore Hore Oo EPL Ah Oo Fashilay Khiyaanada Garsoor Ee Ka Jirta Horyaalkaan Ka Dib Ganaaxii La Duldhigay Sergio Aguero
Waxaa Qoray: Cabdu Wahaab Axmed Cali /////////// Taariikh: 3-09-16 3:45 PM Garsoorihii hore ee horyaalka England Premier League Mark Halsey ayaa caddeeyey inay ku amri jireen Guddiga Garsooreyaasha horyaalka Premier League inuu qirto in uusan arkin waxyaabo ka dhacay ciyaaraha uu garsooray.
55 sanno jirkaan Halsey, oo ka fariistay garsoorka ciyaaraha dhammaadkii xilli ciyaareedkii 2012 illaa 2013 ayaa hadalkaan la yaabka leh kusoo beegay iyadoo ay Premier League dhexmeereysaneyso dood ku saabsan racfaanka uu Sergio Aguero ka qaadanayo ganaaxa seddaxda kulan ah ee uu ku seegi doono kulanka Manchester derby.
Kooxda Manchester City ayaa la fahamsan yahay inay racfaan ka qaadaneyso ganaaxaan maadaama ku celisyadii laga daawaday shaashadaha ay muujinayeen inuu garsoore Andre Marriner ku dhowaa goobtii uu falkaani ka dhacay, wuxuuna u muuqday mid si cad u arkayey wax kasta oo uu Aguero kula kacay daafaca kooxda West Ham United Winston, kaasoo uu xusul ku dhuftay.
Sharciga u yaalla horyaalka Premier League ayaa dhigaya in aan wax tallaabo ah laga qaadi karin ciyaaryahanka haddii uu falka arko garsooruhu waqtigaas inta ciyaarta lagu jiro.
Laakiin garsoore hore Halsey ayaa arrintaan uga hadlay bartiisa Twitter wuxuuna caddeeyey inay Guddiga Garsooreyaasha horyaalka Premier League ee magacooda loo soo gaabiyo PGMOL ku amri jireen inuu qirto in uusan arkin falal ka dhacay ciyaarta dhexdeeda si ganaax loo saaro ciyaartoyda isla markaana ay tallaabo uga qaadaan Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska ee magacooda loo soo gaabiyo FA-ga.
“Waa ay isoo martay xaaladdaan oo kale,” ayuu ku qoray bartiisa Twitter. “Marka aan arko falka iyo shilka dhacay waxaa la ii sheegi jiray inaan qirto in aanan arkin.” – Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in aysan FA-gu ka dambeyn arrintaan balse ay ka dambeeyaan Guddiga Garsooreyaasha horyaalka Premier League.
“Anigoo daacadnimo u muujinaya FA-ga… Arrinkaan iyagu kama dambeeyaan,” ayuu hadalkiisa raaciyey. “Waxaa amarkaan isiin jiray Guddiga Garsooreyaasha horyaalka Premier League ee PGMOL.”
PGMOL waa guddi la sameeyey sannadkii 2001dii si ay horumarin ugu sameeyaan tayada garsoor ee horyaalka Premier League, waxayna garsooreyaal usoo saaraan horyaallada Premier League, Football League iyo tartamada FA-ga.
Daaficii hore ee Manchester United Gary Neville ahna tababare soo leyliyey Valencia ayaana arrintaan ku tilmaamay musuqmaasuq, wuxuuna su’aal ku celiyey garsoore hore Halsey si uu daaha uga qaado cidda ka dambeysa arrinkaan.
“Miyeysan taasi musuqmaasuq aheyn? Mark, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado shaqsiga kuu sheegay inaad sidaas dhahdo,” ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa raaciyey: “FA-ga iyo maamulka Premier League waxay u maleyaan haatan inay gacmahaaga ku jirto caddeyn weyn. Waxaan la hadlay Mark si uu arrinkaan iigu caddeeyo. Dhibaato weyn ayaase taagan.”
Majaladda Daily Mirror ayaa sidoo kale xiriir la sameysay PGMOL si ay arrintaan uga jawaabaan balse waa ay ka gaabsadeen.